ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဘီလီယံနာသူဌေး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသား - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဘီလီယံနာသူဌေး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသား
January 29, 2021 Yan Amazing 0
ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆံပင် ညှပ်ပြီး ဘီလီယံနာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘီလီယံနာ တစ်ယောက် အကြောင်း ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်း အကြီးကြီးတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် လို့ပဲ ပြေးမြင်မိကြမှာပါ ။
ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘန်ဂလို မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ Ramesh Babu ဆိုတဲ့ အမျိုးသားကတော့ ဘယ် လုပ်ငန်းမဆို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ပြီး ဘီလီယံနာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေ ပြနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဘယ်လို ကြိုးစားလာခဲ့ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ အောက်က စာလေးကို အတူဖတ်လိုက်ရအောင်နော်….
ဘန်ဂလို ဒေသခံ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Ramesh Babu ကတော့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် လုပ်ငန်း အပြင် တစ်ခြားသော လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ သာမန်စီးပွားရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Babu ဟာ ဘီလီယံနာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ကား ( ၆၇ ) စီးကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ် ။
Babu ရဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို လာရောက်အားပေးတဲ့ ဖောက်သည်တွေကတော့ အလွှာ ပေါင်းစုံက ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၊ စစ်တပ် အရာရှိတွေ အပြင် အနုပညာ နယ်ပယ်က Salman Khan၊ Aamir Khan နှင့် Aishwarya Rai Bachchan တို့တောင် ပါဝင်ပါသေးတယ် ။
Baubu ဟာ ဘန်ဂလိုမြို့ တစ်မြို့လုံးမှာမှ လူ ( ၅ )ယောက်သာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Rolls Royce ကားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး နေ့တိုင်း Rolls Royce စီးကာ အလုပ်ကို သွားနေတစ်ဦးပါ …….
သူ့ရဲ့ ဝင်ငွေတွေက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကနေ ရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ကယ် အမြတ်အစွန်းကြီးကြီးမားမား ရစေတာကတော့ ဇိမ်ခံကားတွေကို ငှားရမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းကနေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Baubu ရဲ့ စီးပွားရေး ဖြတ်သန်းရပုံတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက Babu ဟာ Ramesh Tours and Travels ဆိုတဲ့ တက္ကစီ လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ အစိုးရ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပြီး ဇိမ်ခံကားငှားရမ်းတဲ့ အလုပ်ကိုပါတွဲပြီး လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမြတ်အစွန်းများလာကာ အခုလိုမျိုး ဘီလီယံနာ တစ်ယောက် ဖြစ်လို့လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Babu ရဲ့ တစ်နေ့တာ ဝင်ငွေဟာ ရူပီး 75000 ခန့်ရှိပြီး သူ့ဆီလာအားပေးတဲ့ ပင်တိုင်စံ ဖောက်သည်တွေကတော့ ကော်ပိုရေးရှင်း ရှင်ကြီးတေွ အပြင် ဘောလိ၀ုဒ် နဲ့ တောလိ၀ုဒ်က စတားတွေပါ ပါဝင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် Babu ဟာ အောက်ခြေကနေတက်လာပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ုဖစ်ပေမယ့်လည်း ဘ၀မမေ့သွားပဲ သာမန် ဆံပင်လာညှပ်တဲ့သူတွေကို ရူပီး ၆၅ ကျပ်လောက်သာ ဝန်ဆောင်ခ ယူတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။